Nhau - Yazvino Mamiriro ezvinhu uye Tarisiro yePTA Chain uye Musika
PX ndiyo inotungamira mbishi pazvinhu zvese zvayenzi indasitiri, Iko kushandurwa kwemaindasitiri kune kukosha kwakanyanya kune iyo chaiyo yakatarwa indasitiri. kupinda zvinyoronyoro kuvandudza kweChina kuzvigutsa mune Xylene Road Research.
Kutanga, tarisa pasi rose PX kupa uye mamiriro ekuda. Munzvimbo yepasi rose China, South Korea, India, Japan neUnited States dzakaiswa panzvimbo shanu dzepamusoro. , semugadziri mukuru wepasi rese, India zvakare ndiyo inodiwa kwazvo nhema. Nekuda kwekuda kwemukati kudhinha kwekupa, inosvika makumi matanhatu muzana yezvekudikanwa kwegore negore inoda kutsamira Nechekunze kubva kunyika dzakavakidzana dzakaita seSouth Korea neJapan. Muna 2018, China PX kuburitsa yaingove mamirioni gumi nemakumi manna nemakumi manonwe, uye yayo yekuregedzera vhoriyamu yaive yakakwira kunge mamirioni gumi nemashanu, nemamwe mazwi, inoda kuendesa kunze kwematani emiriyoni imwe yePX mwedzi wega wega.
Pasi pekutungamirirwa kweiyo musika kusiyana uye kukwezva kwemubhadharo kuti vape mutemo kutsigira kuwedzera kwePar xylene simba rekugadzira muChina rakapinda munguva itsva muna 2005For muenzaniso Hengli Petrochemical muDalian, Shenghong Petrochemical muLianyungang, Jiangsu Muna 2019, iyo itsva PX yekugadzira inosvika 4.5. mamirioni matani eHengli Petrochemical Company, Hongrun Petrochemical Company, iyo yakaiswa muna Nyamavhuvhu, uye Hainan Refining uye Chemical Phase II, iyo yakaiswa mukushanda muna Gumiguru, vese vaona kushanda kwebhizimusi. Pnguva imwechete, mukota yechina, pane yakatangwa yakaumbwa, uye pane mukana wekutanga. Zvinofungidzirwa kuti huwandu hutsva hwekugadzira huchasvika mamirioni gumi nemazana matatu ematani pagore, kuwedzera kwe55% pane yakafanana gore rapfuura. Kubva 2020 kusvika 2022, kuchange kuchine mamirioni makumi maviri nemashanu, uye huwandu hutsva huchaiswa mumusika imwe mushure meumwe.
Kupesana nekumashure kwemukati meimba inotakurirwa China's PX kupa uye kudiwa kwemaitiro kuchinja zvakanyanya. Nekuwedzera nekukurumidza kweChina chePX yekugadzira simba, iro ramangwana rekupa uye maitiro ekudiwa kuNortheast Asia zvishoma nezvishoma anozochinja ave akawandisa, uye munzvimbo yemutengo wakaringana mutengo uye purofiti, inogona kutumirwa zvakare kune dzimwe nyika dzinoda gango. Zvekutengeserana hukama pamwe nekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Panewo mukana wein-way-yekuburitsa zvinhu unotendeuka kuita muchinjika-kutengesa
Kubva pamaonero ekuwanikwa kwepasi rose uye maitiro ekudiwa, China ndiyo inowanikwa munyika yose kuwanikwa, asiwo mutengi mukuru. Chigadzirwa cheChina chegore rose chekugadzira chaive zviuru makumi mashanu neshanu zvemakumi mapfumbamwe nemashanu emamiriyoni, zvichidarika hafu yehuwandu hwepasirese. Kubva pamaonero ekutengeserana kwepasirese kunoyerera, China yehuwandu hwekunze huwandu ndeye mazana manomwe ezviuru ematani, kunyanya kubva kuThailand, Taiwan neSouth Korea.
Kubva pamamiriro ekunze epamusha, maitiro emubhadharo chiratidzo chakakosha chePT yekupa. Muna 2011, PHP yakapinda mukuwedzera kwehuwandu, zvichikonzera kuwanda kwehuwandu hwekugadzira simba, izvo zvakakonzera kudzoreredzwa kwakanyanya kwenzvimbo yekuwana yePDA. Pasi pemakwikwi emamiriro ezvinhu, iyo yakareba-refu miitiro yekuita basa inowanzova yekushomeka, imwe yekuseri yekugadzira simba inobviswa, uye kugovera uye kudikanwa kunowanzove kwakasimba chiyero.PT kuvhura muna 2017, PK yakapinda padanho rekuvandudza kukosha kwebudiriro. Muna 2019, PTA yekuwana purofiti yakakwira kamwe chete kusvika 1700 yuan pagani.PK yakaiswa muwedzero nyowani yepepa rekugadzira.
Kunokanganiswa nekusimudzira kwezvakatipoteredza Endinal, kusimudzira polyester, huwandu hwekuwedzera Iyo huwandu hwemaindasitiri polyester hwakagadziridzwa zvakanyanya, ndiyo hunhu hukuru hweindasitiri yepolyester mumakore maviri apfuura. Zvinoenda pamwe nekuwedzera, kuwedzera polyester, kukwikwidza kwawedzera, zvekuti huwandu hwebhenefiti hwakadzikira zvakanyanya, ramangwana rekugadzira polyester rinoita rombo.
Sezvo kukura kwemaindasitiri kusiri kuwiriraniswa, iyo yakasimba midziyo yezvinhu zvokubikisa yakamanikidza iyo polyester chirimwa purofiti level, polyester chirimwa kuwana kurasikirwa chiitiko mukati megore. Kubva pane maonero ezvemangwana maitiro, polyester inopa kukura kuderera mune ramangwana, pamwe nemaitiro dhizairo uye yakaderera mitengo yekugadzira iri kukonzera kuwedzera kwe polyester purofiti. Nekudaro, Sino-US kutengeserana kukakavara kuchakanganisa musika kune imwe nhanho. MaChina emicheka ekugadzira machira achakanganisa zvakananga zvipfeko zveChina zvekutumira kunze kuUnited States, kunyange paine zviratidzo zvekuvandudza munhaurirano dzekutengeserana dzeSino US. Kubatana kweSino-US kuChina kuiswa kwemitero pamachira kune chekuita zvakananga nezvipfeko zveChina zvinotumira kunze kuUnited States. Kunyangwe paine zviratidzo zvinoshanda munhaurirano dzekutengeserana dzeSino-US dzichangoburwa, machira eEU uye zvakananga kutengeserana kutarisana neChina zvakawedzera zvishoma nezvishoma mumakore achangopfuura, uye maitiro ari pachena. Izvi zvichakanganisa zvakananga kuChina kutumira kunze kwenyika.
Nguva yekutumira: Aug-21-2020